महिला र पुरुषले एकअर्कासँग लु’काउनैपर्ने पाँच कुरा ! जानी राखौं ! – Life Nepali
महिला र पुरुषले एकअर्कासँग लु’काउनैपर्ने पाँच कुरा ! जानी राखौं !
कतिपय मानिसको बानि नै हुन्छ मनमा कुरा लु काउन नसक्ने तर कतिपय कुरा भने गो प्य नै राख्नुपर्ने पनि हुन्छ । श्रीमान र श्रीमतीले हरेक कुरा एक अर्कासँग साझेदारी पनि गर्नुपर्छ । सबै कुरा आफ्ना श्रीमान् वा श्रीमतीसँग खोलेर पोख्नैपर्छ भन्ने छैन । सबैकुरा एकअर्कामा साझेदारी गर्नु उचित हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ ? उनीहरू एकअर्कामा खुलस्त र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
अ’पमानको कुरा: यदि आफूमाथि अ’पमान भएको कुरा पनि दम्पतीले एकअर्कामा साझेदार गर्न आवश्यक छैन । यस्ता कुराले आफ्ना पार्टनरलाई अरू बढी दुःखी बनाउन सक्छ । हीनताबोध पैदा गर्न सक्छ । त्यसैले आफूमाथि कुनै अ’पमान भएमा त्यसलाई साझेदारी गरिरहनु पनि उचित हुँदैन ।
आफ्नै परिवारको न’राम्रो कुरा: श्रीमान् वा श्रीमतीले आफ्नो परिवारको न’कारात्मक कुरा गर्नु उचित हुँदैन । परिवारका सदस्यहरूको ग’ल्ती, कमजोरी औंल्याउने, टिप्पणी गर्ने, परिवारको मान मर्यादामा आँ’च आउने कुराहरू गर्ने बानी राम्रो होइन। परिवारभित्रका कुराहरू सकेसम्म गो’प्य राख्नुपर्छ । परिवारका सदस्यहरूको गल्ती कमजोरी औँल्याउने र त्यसमाथि न’कारात्मक टि’प्पणी गर्ने बानीले दाम्पत्य सम्बन्धलाई ध’रापमा पार्न सक्छ।
अर्काको च’रित्र ह’त्या गर्नु: श्रीमान् वा श्रीमतीले अर्काको चरित्रलाई लिएर पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । चाहे घरका सदस्य होस् वा छिमेकी, साथीभाइ होस् वा कार्यालयका सहकर्मी। उनीहरूको चरित्रलाई लिएर नका’रात्मक टिप्पणी गर्नु आफैँमा ख’राब प्रवृत्ति हो । त्यसैले आफूले अर्काको चरित्रमाथि औँला उठाइरहँदा पार्टनरमा आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै ख राब बन्न सक्छ ।
त्यसैले अर्काको च’रित्र ह त्या हुने किसिमको टीकाटिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । परिवारका सदस्य, छिमेकी, साथीभाइको व्यक्तिगत चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरा दम्पतीबीच साझेदार गर्नु जरुरी पनि छैन । बरु अरूको चरित्रबारे चर्चा गरेर समय खर्च गर्नुभन्दा आफ्नै घर व्यवहारको कुरा गर्नु उचित हुन्छ ।
Previous महिला र पुरुष दुबैले धेरै बेरसम्म गर्न न’हुने ३ काम ! जानी राखौं !
Next ५/७ बर्ष भयो होला म रा’म्रो संग सु’तेको छै’न – ज्योति मगर